बन्दाबन्दीमा छाक टार्न समस्या भयो ? ११८० मा सम्पर्क गर्नुस् - Chandragiri News
Home समाज बन्दाबन्दीमा छाक टार्न समस्या भयो ? ११८० मा सम्पर्क गर्नुस्
२०७८, २० जेष्ठ बिहीबार १५:२२
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्दाबन्दीको समयमा कसैलाई छाक टार्न समस्या भए हटलाइन नम्बर ११८० मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ । दोस्रो लहरको काभिड–१९ का कारण देशका अधिकांश जिल्लामा बन्दाबन्दी गरिएको छ । यस समयमा कसैलाई दैनिकी चलाउनका लागि खाद्य सामग्री आवश्यक परे महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न भनिएको हो । अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सङ्घसंस्था र महानगर आफैँले पनि वडासँग समन्वय गरी समस्यामा परेकालाई खाद्य सामग्री वितरण गरेको थियो ।
Previous articleचनपा-२ वाडभन्ज्याङ्ग मा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न ।
Next articleगन्धर्वको पीडा : रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भइयो